Real Madrid Oo Ogolaatay In Marco Asensio La Fasaxo iyo Kooxaha Ku Hirdamaya Oo Tiradoodu Sii Badanayso – Cadalool.com
Real Madrid Oo Ogolaatay In Marco Asensio La Fasaxo iyo Kooxaha Ku Hirdamaya Oo Tiradoodu Sii Badanayso
October 20, 2018 Abdiwahab A. Abeye
Saddex kooxood oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayaa diyaar u ah inay qasnaddooda u jabiyaan laacibka da’da yar ee Marco Asensio oo la sheegay in Real Madrid ay ogolaatay in bisha January la iibiyo.
Asesnsio oo ay da’diisu tahay 22 jir ayaa waxa la sheegay in kooxaha Ingiriisku ay u diyaarsadeen inay bixiyaan lacagta ay Madrid ku doonayso inay ku iibiso oo dhana £100 milyan oo Gini.
Sida uu qoray wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain, tababaraha Real Madrid, Julen Lopetegui ayaa isku diyaarinaya inuu kooxda ka diro Asensio oo uu u arko in aanu kusoo baxay qorshihiisa, hase yeeshee laacibkan ayaa tan iyo bilowgii ahaa udub-dhexaad u ahaa shaxda koowaad ee tababaraha oo boos joogto ah siiyey intii uu xili ciyaareedkani socday.
Asensio oo ka ciyaara garabka weerarka amaba dhexda weerarka xigta, ayaa waxa la filayey in xili ciyaareedkan uu si buuxda u qaato booskii uu banneeyey Cristiano Ronaldo, hase yeeshee tababare Lopetegui ayaa doonaya in uu shaxdiisa ka saaro, una ogolaado inuu uga wareego naadi kale, waxaana markii uu warkan soo baxayba dhegta taagay saddexda naadi ee Chelsea, Manchester United iyo Liverpool oo hore u muujiyey inay xiisaynayaan.
Kooxda haysata horyaalka waddanka Faransiiska ee PSG ayaa hore u shaacisay sida ay ula dhacsan tahay ciyaartoygan, waxaana la filayaa in aanay ka maqnaanin liiska kooxaha raadinaya Asensio oo ay suurtogal tahay in maamulka sare ee Los Blancos ay ka hor yimaaddaan qorshaha uu tababaruhu doonayo inuu kaga diro Bernabeu.
Toddobaad ka hor, Asensio oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ka tago Real Madrid, waxaanu yidhi: “Waligay ima gelin dareenka ah inaan meel kale tago.”
Si kastaba ha ahaatee marka la gaadho bisha January ee uu furmo suuqa iibka ciyaartooyadu ayaa la ogaan doonaa sida uu u shaqeeyo qorshaha uu Lopetegui ku doonayo inuu ku fasaxo Asensio.